China Intelligent Control Jersey Calandra Roll Heat Press Machine orinasa sy mpamatsy | Asiaprint
1. Panel momba ny lamba marani-tsaina: fanaraha-maso mazava tsara ny mari-pana sy ny fotoana. Izy io dia famolavolana mahaolona ary mora ampiasaina.
2. Rack Drive: ahenao ny setroka ao anaty chassis, fotoana fanompoana maharitra.
3. Tambo-menaka namboarina: Mahavariana ny mitsitsy toerana sy mampihena ny vidiny, hamboarina ho azy tsy ho simba izy io.
4. Fitaovana misaraka amin'ny tanana: raha misy fanapahana herinaratra, ampitomboy ny fiarovana sy ny famolavolana ny fitaovana miverina amin'ny tanana mba hiarovana ny ain'ny serivisy lamba firakotra.
5. Shaft-drivotra: Ho an'ny fanangonana taratasy sublimation efa niasa, dia afaka mamonjy fotoana sy ezaka izy io.
6. Vondron'ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha: fandidiana matanjaka kokoa noho ny hafainganam-pandehan'ny fanontana.
7. Teflon conveyer belt: fanaparitahana hafanana haingana ary hiantohana ny vokam-pamindrana.
Modelin'ny vokatra JC-26B Calandra
Roller width 1.8m
Lanja be (KG) 3000kg
Haben'ny fonosana 3000 * 1770 * 1770cm
Zintin'aratra 380 3phase
Hafainganana famindrana 6 m / min
Amponga Solika 100%
Fomba famahanana Famahanana ambony
Latabatra fiasana anisan'izany ny
Fanamarihana Haben'ny namboarina amin'ny kaomandinao manokana
Masinina namboarina hiara-miasa amin'ny mpamatsy herinaratra samihafa
MOQ 1 Mametraka
1. traikefa 20 taona mahery
Asiaprint dia misahana manokana ny sublimation sy ny pirinty fanaovana pirinty nandritra ny 20 taona mahery. Miaraka amin'ny kalitao milamina sy ny fihetsika matotra amin'ny asa aman-draharaha dia efa manana mpanjifa / mpaninjara firenena 50 mahery izahay.
2. Serivisy OEM / ODM
Nanamboatra milina OEM / ODM ho an'ny milina marika marika US, Alemana ary UK malaza izahay.
3. Valiny haingana
Valio ny fifampidinihana sy ny olana ao anatin'ny 24 ora fiasana.
4. Ekipa mpivarotra matihanina
5. Serivisy fijanonana tokana
Serivisy mijanona iray ho an'ny mpanonta sublimation, milina famindrana hafanana, taratasy fanoratana ary ranomainty sublimation, banga sublimation, sns.
6. Vidiny avo lenta sy antonony
Ny masinina tsirairay dia hosedraina alohan'ny fanaterana hitazomana ny kalitao milamina.
7. Fanohanana MOQ kely
Ny ankamaroan'ny vokatray dia tsy misy fangatahana MOQ hanohanana.
8. Fandefasana ara-potoana
Teo aloha: 1.7m Width Calendar lamba famindrana hafanana Machine Press
Manaraka: 3.2m Calandra Roller Heat Press Machine
Milina fampidirana lamba mandeha ho azy lehibe
Masinina fanaovana pirinty fusing nomerika nomerika
Fitaovana avo lenta avo lenta avo lenta avo lenta ...